ဒုစရိုက်ဖြေ-အခမဲ့ခရီးစဉ်ခံစားခြင်း: ဘော်ဒါဆောင်နေထိုင်ရန် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဒုစရိုက်ဖြေ-အခမဲ့ခရီးစဉ်ခံစားခြင်း: ဘော်ဒါဆောင်နေထိုင်ရန်
အားဖြင့် Karina Santos
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 20/11/2020)
ဘော်ဒါဆောင်ညစ်ပတ်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်မကောင်းတဲ့ရက်ပ်ခဲ့ကြ, မှိန်, နှင့် stinky. သို့သော်သင်ကဘော်ဒါဆောင်များကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပြီဆိုတာသင်သိပါသလား? နေထိုင်ရန်အဆောင်များတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာမသိရပါဘူးသူများအတွက်, ဟိုတယ်ကိုလွဲမှားစွာမရေးဘဲကျွန်တော်နှင့်အတူပြေးခဲ့သည်. ဘော်ဒါဆောင်စျေးပေါနေရာထိုင်ခင်းများမှာ ကြောင်းသင်သည်သင်၏ခရီးသွားဘတ်ဂျက်ဆန့်ကူညီကြမည်.
သင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းရှိမရှိ တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွား သို့မဟုတ်သင့်မိသားစုသို့မဟုတ်သိသာထင်ရှားသောနဲ့ခရီးသွားလာနေသော, နေထိုင်ရန်အဆောင်များရုံသင်တို့အဘို့အကာနေရာထိုင်ခင်းအမျိုးအစားများ. ဘော်ဒါဆောင်များသောအားဖြင့်အခန်းပေါင်း shared ပါပြီ. တစ်ဦးကမျှဝေတဲ့အခန်းရှိသည်နိုင် 8 သို့ 10 လူအပေါင်းတို့သည်အတူတကွ bunking. အချို့ရှိနိုင်တယ်လို့ခန်းများ3သို့မဟုတ်4အခန်းတခန်းမျှဝေလူတွေ. သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အာကာသလိုပါက, များစွာသောအရပ်တို့ကိုပုဂ္ဂလိကအခန်းပေါင်းသို့မဟုတ်မိသားစုအခန်းပေါင်းပူဇော်, သငျသညျလျှင် မိသားစုနှင့်အတူခရီးသွား.
ဘော်ဒါဆောင်သောရိုးရှင်းသောရှိသည်မဟုတ်စေခြင်းငှါ ဟိုတယ်များ ပေးကမ်း. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အခန်းတစ်ခန်းအတွင်းမှအဘယ်သူမျှမကကော်ဖီစက်ရှိစေခြင်းငှါ,, အခမဲ့ဆပ်ပြာမရှိ, သို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ရေခဲသေတ္တာ. သင်ပင်အခမဲ့လက်သုတ်ပုဝါလာပြီမည်မဟုတ်ပါ. ဒါပေမဲ့တချို့နေထိုင်ရန်အဆောင်များအမှန်တကယ်တစ်ဦးစျေးပေါစျေးနှုန်းမှာဆပ်ပြာနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များကိုရောင်းချ. ထိုအသေချာ, သငျသညျဖြစ်ကောင်း shared ခန်းထဲမှာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တျသို့မဟုတ်ဗီရိုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, ဒါပေမဲ့သူတို့ကသင်သည်သင်၏အမှုအရာသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ Locker တွေမ. သငျသညျသော်လည်းသင့်ကိုယ်ပိုင်သော့ခလောက်ရောက်စေဖို့ရှိစေခြင်းငှါ. သင့်ရဲ့အိတ်များလွန်းကြီးတွေနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပြီးနောက် အကယ်., သင်ဆဲအချို့သောနောက်ဆုံးမိနစ်လုပ်ချင် အပန်းဖြေ, သင်အိတ်စတိုးဆိုင်မှာသင့်အိတ်ထွက်ခွာနိုင်.
အိပ်ရန်သန့်ရှင်းသောနေရာရှိခြင်းအပြင် သင်၏ပစ္စည်းများကိုသိမ်းဆည်းရန်လုံလုံခြုံခြုံသောသော့ခတ်ပါ, ဤအသောနေရာများအချို့ကိုအဖြစ်ကောင်းစွာနဲ့အခြားသာယာအဆင်ပြေမှုများပူဇော်. တချို့နေရာတွေမှာရေကူးကန် access ကိုနဲ့တူသောအရာတို့ကိုရှိသည်လိမ့်မယ်, အခမဲ့နံနက်စာ, အခမဲ့ကော်ဖီ, အသိုင်းအဝိုင်းလှုပ်ရှားမှုများ. အချို့ကပင်အပူပေးခန်းများနှင့်အနှိပ်ရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းရှိသည်နှင့် မိုးလုံလေလုံစားသောက်ဆိုင်.
အိုကေ, သေချာ, သငျသညျဖြစ်ကောင်းသင်တစ်ဦးဟိုတယ်ထဲမှာလိုတူ privacy ကိုမရကြလိမ့်မည်. ရေချိုးခန်းနဲ့တူအသိုင်းအဝိုင်းဒေသများရှိပါတယ်, မီးဖိုချောင်, Lounge ဒေသများ, နှင့်အလုပ်စခန်းများ. သို့သျောလညျး, ဤအကောင်းတစ်လမ်းဖြစ်၏ လူတွေကခရီးဦးကြိုပြုခြင်း. သင်အသိုင်းအဝိုင်းဒေသများရှိထွက်ဆွဲထား အကယ်. လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှခရီးသွားများအတွက်တွေ့ဆုံရန်နိုင်. ထိုအပင်သင်သည်သင်၏အတွက်ဖြည့်ဆည်းလူတို့နှင့်အတူအဓိပ္ပါယ်ရှိသောခင်မင်ရင်းနှီးစတင်ရန် ခရီးသွားမှတ်တမ်း အသစ်အနာဂတ်ခရီးသွားလုပ်သူများရှိ, လွန်း! နေထိုင်ရန်အဆောင်များအတွက်အလုပ်လုပ်သူကိုလူတွေကများသောအားဖြင့်ပျော်စရာနှင့်လူပေါင်းကောင်းသောလူမျိုးဖြစ်ကြ၏, ဒါကြောင့်ရောနှောသူတို့နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖို့ကောင်းပါတယ်, အဖြစ်ကောင်းစွာ.
အချို့သောဘော်ဒါဆောင်များမှာ မြို့လယ်ခေါင် သို့မဟုတ် သငျသညျမဟုတ်ရင်တောင်မှရှာဖွေတွေ့ရှိမည်မဟုတ်သောနေရာများ. Freehand မိုင်ယာမီ, ဖလော်ရီဒါမှာရှိတဲ့ဘော်ဒါဆောင်, နှစ်ခုသာလုပ်ကွက်များကွာကမ်းခြေကနေဖြစ်ပါတယ်နှင့်၎င်း၏ဧည့်သည်များအခမဲ့ iced ကော်ဖီကမ်းလှမ်း. ထိုအ Hostel အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလို့ခေါ်တဲ့အကျိုးအမြတ်မယူသဖြင့်စတင်ခဲ့တဲ့ဆွစ် spa ဘော်ဒါဆောင်တစ်ခုမိုးလုံလေလုံစားသောက်ဆိုင်ရှိပါတယ် ဆွစ်အဲလ်ပ်တောင်တန်း overlooks.
သင်တစ်ဦးဘတ်ဂျက်ခရီးသွားရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင်တစ်ဦးဘော်ဒါဆောင်များတွင်တည်းခိုအတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်ဟုအလွန်အမင်းဖွယ်ရှိရဲ့. စျေးနှုန်းဟာအနည်းဆုံးဆင့်ကနေအနည်းဆုံးကနေစတင်နိုင်ပါတယ် $100 shared ခန်းများအတွက်, သင်၌ရှိကြသောကမ္ဘာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပေါ် မူတည်., စျေးနှုန်းများထက်ပိုမိုမြင့်မားသွားပါရန်အဘို့အဒါပေမယ့်အလွန်ရှားပါးင်. အဆိုပါ overlooks ကြောင့်ပင်ဘော်ဒါဆောင် အဲလ်ပ်တောင်တန်း ပတ်ပတ်လည်သွားသည် $64 တစ်ည.
ငါတို့သည်သင်တို့ပေးလိုသောနောက်ဆုံးသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ပါသည်, သင့်ရဲ့ဘော်ဒါဆောင်မှရရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းနှင့်အတူရထားခရီးသွားရတတ်၏ တစ်ဦးကရထား Save နှင့်များအတွက်အကြောင်းပြချက်ရထားအမြဲတမ်းမြို့၏စိတ်နှလုံးမှာရောက်လာခြင်းနှင့်ဘော်ဒါဆောင်နေရာထိုင်ခင်းများမှာဘယ်မှာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်, သင့်ရဲ့ခရီးသွားနှင့်ရထားခရီးသွားပျော်မွေ့.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fenjoying-a-guilt-free-trip-hostel-accommodation%2F- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/in_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ / pl သို့မဟုတ် / က de နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့အတွက် / ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#ဘော်ဒါဆောင် #နေထိုင်ရန်အဆောင်များ traveltips
Karina Santos - isamom ofa2-year-old boy, andawife. Her day is filled with diapers and emails. ဒီအတွက်ကြောင့်, she has discoveredawhole new level of multi-tasking. Her weekdays mostly revolve around work, and family. She loves spending her weekends with her baby and going on date nights with her husband. - သငျသညျဒီမှာနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ